Fikambanana��ny Bena��ny TanA�na ambanivohitra :Tafatsangana ara-panjakana ny AKAMA – fanilo
Fikambanana��ny Bena��ny TanA�na ambanivohitra :Tafatsangana ara-panjakana ny AKAMA
Nanatanteraka valandresaka ho ana��ny mpanao gazety, ny herinandro lasa iny, ny fikambanana��ny Bena��ny TanA�na ambanivohitra, fantatra amina��ny hoe : Aingana��ny Kaominina Ambanivohitra mitambatra eto Madagasikara na ny a�?Akamaa�?. Rakotomalala Noelson no filohana��ny fikambanana��ny bena��ny TanA�na ambanivohitra manerana ana��i Madagasikara. Mahatratra 1695 ny isana��ny kaominina manerana ana��i Madagasikara. 76 amina��ireo no kaominina ambonivohitra, raha 1625 kosa, ny kaominina ambanivohitra. Raha ny kajikajina��ireo bena��ny TanA�na mivondrona ao anatina��ny Aingana��ny Kaominina Ambanivohitra mitambatra eto Madagasikara na ny a�?Akamaa�?, A�manodidina ny 1500 eo ireo bena��ny TanA�na mivondrona ato anatina��ity fikambanana ity. Ny 4 oktobra lasa teo no nananganana ny fikambanana��ny bena��ny TanA�na mivondrona ato anatina��ny a�?Akamaa�? ary nambara tamina��ny fomba ofisialy teny amina��ny Colbert Antaninarenina, ny fijoroany ara-dalA�na, mitondra ny laharana 1877, izay manamarina ny fijoroana��ny fikambanana��ny bena��ny TanA�na eo anivona��ny kaominina ambanivohitra.
Raha ny fanambarana��izy ireo, vonona hiady ny tsindrihazolenaA� manjo azy ireo ny Fikambanana��ny bena��ny TanA�na ambanivohitraA� mivondrona ao anatina��ny a�?Akamaa�?. A�Anisana��ny mampalahelo azy ireo, ny mbola tsy nandraisana��ny sasany tamina��izy ireo ny famatsiam-bola avy amina��ny fitondram-panjakana. Nitondra fitarainana, ohatra, ny bena��ny TanA�na voafidy tao amina��ny Kaominina Berivotra, ao anatina��ny distrikana��i MaevatanA�na, Rakotomalala Voahanginirina. a�?Te hikiakiaka izahay, te hilaza ny marina momba ny Kaominina ambanivohitra manerana ana��i Madagasikara, indrindra ny tsindrihazolena manjo anay eo anatrehana��ny solombavambahoaka sy loholona; Raha sitrakareo, aleo ny bena�� ny TanA�na no hitantana ilay CLD. Betsaka ny kaominina tsy nahazo ny fanohanana ara-bola avy amina��io CLD io, anisana��izany ny Kaominina izay iadidiakoa�?, hoy izy. Nilaza kosa, ny bena��ny TanA�na avy any amina��ny faritra Atsimo iny, fa efa ho tonga amina��ny farany volana novambra ity ny CLD ka hisitraka izany avokoa ny Kaominina rehetra manerana ana��i Madagasikara.
Raha ny fantatra, samy hafa avokoa ny antoko politika misy ireto bena��ny TanA�na nivondrona ao anatina��ny antsoina hoe a�?Akamaa�? ireto. Na eo aza izany, tsy hampisara-bazana ny fikambanana vao najorona��izy ireo akory izany. Nanentana ny bena��ny TanA�naA� namany, ny filohana��ny fikambanana Akama fa a�?tokony hijoro sy hiray sainaA� izy ireo amina��ny A�fanamparam-pahefana isan-karazany manjo. Ny tanjona, ny mba hahazoana��ny vahoaka nifidy azy ireo marina, ny tombontsoa tamina��ny nahalaniana ireo bena��ny TanA�na ireoa�?. Nantitranterina��ny filohany kosa, fa tokony hipetraka tsara ny momba ny fifandraisana amina��ny solombavambahoaka, ny loholona, ny sefo distrika. Nanao antso avo amina��ny bena��ny TanA�na manerana ana��i Madagasikara, ny tenany, fa tsy tokony hatao biby fampitahorana ny bena��ny TanA�na ny sefo distrika. Tokony izy aza no tetezana mampifandray ny bena��ny TanA�na sy ny tomponandraikitra itsinjaram-pahefana. Raha ny fijoroana vavolombelona nataona��ity bena��ny TanA�na voafidy tany Amparihibohitra, distrikana��i Soavinandriana, Faritra Itasy fa misy ireo bena��ny A�TanA�na avy amina��ny kaominina ambanivohitra, matahotra sefo distrika tsy misy toa izany.
kamagra apteka beast protein review
bodybuilding optimum nutrition whey musculos de la espalda alta vegetarian bodybuilding food list
natural supplements for bodybuilding how to choke yourself muscular male bodybuilders
Manda ho an’ny firaisankinam-pirenena: « Tafita ny fanilo. »
Nanatanteraka valandresaka ho ana��ny mpanao gazety, ny herinandro lasa iny, ny fikambanana��ny Bena��ny TanA�na ambanivohitra, fantatra amina��ny hoe : Aingana��ny Kaominina Ambanivohitra mitambatra eto Madagasikara na ny a�?Akamaa�?. Rakotomalala Noelson no filohana��ny fikambanana��ny bena��ny TanA�na ambanivohitra manerana ana��i Madagasikara. Mahatratra 1695 ny isana��ny kaominina manerana ana��i Madagasikara. 76 amina��ireo no kaominina ambonivohitra, raha 1625 kosa, […]
KMFCNOE: a�?Aleo hezahana ho tratra ilay isana��ny mpifidy 10 tapitrisa.a�?
8 andro sisa dia higadona ilay antsoina hoe "taom-pifidianana", araka izay namaritan'ny vaomiera mahaleontena misahana ny fifidianana na CENI azy. Nampanantena ny teo anivon'ity rafitra ity fa hanao ny ezaka rehetra hampangarahara ny fifidianana rehetra ho avy eo. Etsy ankilan'izay kosa ny KMFCNOE dia mikarakara fikaonan-doha goavana hametrahana paikady hahafahana manara-maso izany sy hanabeazana ireo mpifidy.
Teza : Mila omena hasina ny Fokonolona amina�� ny Fampandrosoana
Foto-kevitra nijoroana�� ny antoko Teza hatramina�� izay ny fanomezan-danja ny fokonolona. Araka ny nambaran-dRakotoamboa Jean Louis,Filoha nasionalina�� ny antoko Teza fa A� mila omen-kasina ary lanja manokana mihitsy ny fokonolona manerana ana�� i Madagasikara amina�� ny fampandrosoana ny Firenena A�.
Ady amina�� ny kolikoly : Tsy mahomby i Madagasikara
Saro-toerana ny fampiharana ny ady amina��ny kolikoly eto Madagasikara. Nisy anefa ny fifanaovan-tsonia marobe notanterahina��ny firenentsika iadiana momba ity fositra manimba ny hoavim-pirenena itya��